संसदमा गृहमन्त्री बादलको खुलासा : विप्लव समूहसँग ४ कम्पनी सेना !
काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको ४ वटा सैनिक कम्पनी रहेको बताएका छन् ।
सोमवार संसदमा बोल्दै बादलले विप्लव समूहले जनसेनाको नाममा ४ वटा कम्पनी गठन गरेको बताएका हुन् ।
‘केही समययता विप्लव भन्ने समूहले संविधान र राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध, गैरकानूनी र शान्ति विरोधी गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जनसेनाको रूपमा ४ कम्पनी निर्माण गरेका छन् । नेकपा भन्ने नामको पार्टी पनि गठन गरेका छन् । सशस्त्र र गैरकानूनी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश संघको निर्वाचनमा पनि उनीहरूको गतिविधि देख्यौं ।’
गृहमन्त्री बादलले देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध भन्दै ठाउँठाउँमा विष्फोट गरेका घटनाहरू पनि देखेको बताएका छन् । ‘हिजो आज यस्ता गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेका छौं । उनीहरूको मूल निशाना उपत्यका बनिरहेको छ,’ बादलले भने ।
काठमाडौंमा भएको बम विस्फोट घटनामा ४ जनाको मृत्यु र आधा दर्जन घाइते भएको गृहमन्त्री बादलले बताएका छन् । ‘अहिले मृत्यु भएको नागरिकको होइन,’ आम नागरिक मृत्यु नभएको भनी टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘विप्लवसम्वद्ध कार्यकर्ताको मृत्यु भएको हो र घाइते पनि उनीहरूकै भएका छन् । यसरी शान्ति र स्थायित्वलाई प्रभाव पार्ने ढंगको गतिविधिहरू उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।’
अमृततुल्य यी गुण थाहा पाएपछि तपाईंले ज्वानो कसरी भुल्नुहोला ? काठमाडौं – मौसम परिवर्तनको बेला हुने संक्रमणले मानिसहरू अनेक खालका मौसमी रोगबाट पीडित छन् । यस्तोमा राम्रोसँग तरकारीमा ज्वानोको प्रयोग गर्ने हो भने या औषधीकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने...